सावधान ! मोटरसाइकल चोरी बढ्यो, कहाँकहाँ हुन्छन् मोटरसाइकल चोरी ? « Nepal Bahas
सावधान ! मोटरसाइकल चोरी बढ्यो, कहाँकहाँ हुन्छन् मोटरसाइकल चोरी ?
अनुसन्धानमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता तीव्र
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७६, आईतवार २०:३९
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धका होमनाथ खतिवडाको मोटरसाइकल चोरी भयो । मोटरसाइकल चोरी भएपछि उनले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे । खोजी तथा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मोटरसाइकल फेला पर्‍यो । ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई मोटरसाइकल खतिवडालाई बुझायो । दैनिक काम समेत अवरूद्ध भइरहेको अवस्थामा प्रहरीबाट मोटरसाइकल पाएपछि भावुक हुँदै प्रहरीले जनताका लागि गरेको कामप्रति उनले खुशी व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी धादिङ सेर्तुङ–३ निवासी बेमान तामाङको मोटरसाइकल पनि चोरी भयो । मोटरसाइकल चोरी भएपछि दैनिक रुपमा काम गर्न निकै समस्या पर्‍यो । उनले प्रहरीमा उजुरी दिए । ट्राफिक प्रहरीले खोजी तथा अनुसन्धान गर्दै जाँदा चोरी गरी लुकाएर राखेको स्थानबाट मोटरसाइकल फेला पर्‍यो । हराएर पाउने आशा मारेको मोटरसाइकल पाएपछि उनी अझै बढी खुशी भए । चोरी भएको मोटरसाइकल यसरी फेला पर्छ भन्ने लागेकै थिएन उनले भने,“प्रहरीले गरेको काम देखेपछि प्रहरीप्रति पूर्ण विश्वास लाग्यो ।”
काठमाडौंको बौद्ध, जोरपाटी, पेप्सीकोला, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, गौशाला, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल वरपर, बुढानिलकण्ठ, ठमेल, सुन्धारा, बालाजु, कलंकी, पुल्चोक, ग्वार्को, जावलाखेल र लगनखेलबाट बढी मात्रामा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन् । उपत्यका बाहिर बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, धरान, इनरुवा, सप्तरी, रौतहट, कास्की, रुपन्देही, सुर्खेत र कैलाली लगायतका विभिन्न ठाउँबाट बढी मात्रामा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
खतिवडा र तामाङ जस्तै राजधानीमा आजकल धेरैको मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको छ । यो क्रमलाई रोकथाम गर्न महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्न अगाडि बढाएको छ । यस सम्बन्धमा महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्त भन्छन् – “चोरी भएका मोटरसाइकल खोजतलासको काममा पीडित सहायता इकाईका प्रहरी कर्मचारीहरू सादा पोसाकमा खटिन्छन् । शंकास्पद मोटरसाइकल जाँच गर्ने, वर्कशपमा चेक गर्ने, इन्जिन तथा चेसिस नम्बर जाँच गरी रुजु गर्ने र चोरीको हो वा होइन पत्ता लगाउने गरिन्छ । पीडितको निवेदनको आधारमा कम्प्युटर फाइलमा इन्जिन नम्बर तथा चेसिस नम्बरको खोजी समेत गरिन्छ । यसबाट हराएको र नहराएको एकिन हुन्छ ।”
विशेष गरी लक भाँचिएको, वायरिङका तारहरु यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा भेटिएका मोटरसाइकल बारेमा थप अनुसन्धान हुन्छ । मोटरसाइकल बढि मात्रामा चोरी हुने स्थानमा निगरानी गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र कानूनी कारबाही गरिन्छ । समय समयमा सचेतनामूलक पर्चा वितरण पनि गर्ने गरिन्छ । धेरै जसो साँझ र रातको समयमा घर कम्पाउण्डको ताला फुटाएर मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको भेटिने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
चोरीका मोटरसाइकल प्रायः दुर्गम बस्तीमा घाँस दाउरा बोक्न, दुध ओसार पसार गर्ने काममा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । राजधानीका मोटरसाइकल दुर्गम जिल्लामा लगेर नक्कली ब्लुबुक बनाएर चलाउने, नयाँ मोटरसाइकलको पाटपूर्जा खोली पुराना सक्कली मोटरसाइकलमा राख्ने र काम नलाग्ने पार्टपूर्जा बेवारिसे अवस्थामा फाल्ने गरेकाले पनि मोटरसाइकल फेला पार्नमा समस्या देखिएको ट्राफिक प्रहरीको अनुभव छ । चोरी हुनबाट बच्न ह्विललक, डिसलक, ब्रेकलक, फ्युललक लगाउन अल्छी नमान्ने र सम्भव भएसम्म जिपिएस ट्रयाकर लगायतका उपकरणको जडान गरी मोटरसाइकल चोरीबाट सुरक्षित रहन सकिने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पन्त बताउछन् ।
आठ महिनामा १४ सय मोटरसाइकल चोरी, पौने चार सय मात्र फेला !
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाबाट १ हजार ३ सय ९८ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये ३ सय ७६ वटा मोटरसाइकल फेला परेका छन् । फेला परेकामध्ये २ सय ६३ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई तथा ९९ वटा मोटरसाइकल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । बाँकी ३० वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाई छ । चोरीमा संलग्न ६९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गरेको छ ।
यसैगरी गत आ.व. २०७४/०७५ मा १ हजार ६ सय ३४ वटा मोटरसाइकल चोरी भएका थिए । तीमध्ये ४ सय ८१ वटा मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्न सफल भएको थियो । ३ सय ४१ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको थियो भने ८३ वटा मोटरसाइकल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो । वाँकी ८९ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउन वाँकी छन् । ट्राफिक प्रहरीले ४२ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गरेको थियो ।
चोरी हुने गरेका मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीले सक्रिय भएर खोजी तथा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाउँदै आएको छ । चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई ट्राफिक प्रहरीले कानूनी कारबाही गर्दै आएको छ । साथै मोटरसाइकल चोरीलाई रोकथाम गर्न विभिन्न ठाँउमा खटिएर डिउटी गर्ने ट्राफिक प्रहरीले जथाभाबी पार्किङ नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
मोटरसाइकल चोरी हुनुभन्दा पहिले स्वयं धनी सचेत भएमा चोरीमा कमी आउने ट्राफिक प्रहरीको अपेक्षा छ । मोटरसाइकल चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा समेत ट्राफिक प्रहरीले फेला पारी पक्राउ गरेको छ । चोरी भएमा जति छिटो ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गर्‍यो त्यति नै छिटो मोटरसाइकलको खोजी तथा अनुसन्धान हुने गरेको छ ।
चोरी भएको लामो समयपछि खबर गर्दा मोटरसाइकल अन्य स्थानमा लैजाने र चोरी गर्ने व्यक्ति समेत भाग्न सक्ने भएकाले तत्काल ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गर्नु राम्रो हुने प्रहरीको भनाई छ ।